Comments By Post၄ လရှည်ကြာ ရွာထဲမှာ - Myo Thant - အလင်း ဆက်အိပ်မက်မင်းသမီး - Myo Thant - Kaung Kin Pyarလူစွန့်စားမြင့်ကျော်နှင့် ခေါင်းပြတ်နတ်ရုပ်တု (စ/ဆုံး) - kyeemite - ဦးကြောင်ကြီးအမျိုး ဘာသာ သာသနာကို စောင့်ရှောက်ကြမယ် ဆိုရင် ဖြင့် - nay khin - မိုချိုမောင်ပေ ရဲ့ ပုံတိုပတ်စများ - kyeemite - Myo Thantနားစွန် နားဖျား ရပ်ကွက်...။ - kyeemite - kyeemiteတောင်းပန်အပ်ပါသည်။ -etone - သူကလေးကျွန်ုပ်ရောက်ရှိခဲ့သော ကျတ်တို့ဌာနီ - kyeemite - Miss Crystallineကိုရီးယားဇာတ်လမ်းတွဲတွေက ရတဲ့ အတွေး - သူကလေး - Mr. MarGaComment မှာ လူစည်ချင်ရင် (ယတြာ) - Foreign Resident - မင်းမင်း``ဒေဝေါကြီး လာမှာစိုးတယ်´´ -etone - ဦးကြောင်ကြီးမြေမျိုပျောက်ကွယ်ခြင်း - kyeemite - ဦးကြောင်ကြီးအတိတ်က ခြေရာတွေပြန်ကြည့်ရအောင် - ဦးကြောင်ကြီး - kyeemiteနံရိုးကြံမဆိုင် မြီးရှေ easy cook - Miss Crystalline - YUYA MONသူတို့ ရောက်လာကြတော့မည်၊ သတိသာ ထား - ဦးကြောင်ကြီး - မဟာရာဇာ အံစာတုံးသဂျီးနောက်ကနေ ဘယ်သူထိုး who? - မင်းမင်းရပ်ကွက်မှသည် နိုင်ငံဆီသို. - ရွှေတိုက်စိုး - kaiသို့ ချစ်သောဖေဖေ - Myo Thant - uncle gyiသမ္မတကြီး ဦးကြောင် အိမ်သာview - Miss Crystalline - မောင် ပေbin bo..........(ဘင်ဘို) - Aung Myat Lin - uncle gyiအထူးတလည် ကျေးဇူး တင်ရှိခြင်း - Foreign Resident - Mobile13ငါ ရဲ့ ငါ မဟုတ်တဲ့ ကဗျာ - Mobile13 - လူကလေးရထား ထွက်တော့ မယ် - Mobile13 - ရဲစည်(ခ)စောဖွပြေးအဟံ ပထမံ - padonmar - kaiCongress - ရာမည - ရာမညကျွန်တော့်စိတ်ဓာတ် - Silver Twig - လုံမလေးမွန်မွန်အိပ်ပျော်နေသူများ နှိုးရခက်သည် 。。。。。。。。。 - ရဲစည်(ခ)စောဖွပြေး - မဟာရာဇာ အံစာတုံးကျီးအာသီးနှင့်တူသော နိုင်ငံတကာအဆင့်မှီ - TNA - TNAPassport လျှောက်မယ်ဆိုရင် - uncle gyi - အရီးခင်လတ်သူကြီးနှင့်တကွ ရွာသူား အားလုံးသို့ ...အိတ်ဖွင့်ပေးစာ.... - အလင်း ဆက် - အလင်း ဆက်East West Dental	PACE	Western Union	Category	Arts & Humanities
Top 10Yin Nyine Nway (77895 Kyats )intro (76971 Kyats )SP (70551 Kyats )naywoonni (67257 Kyats )zaylay (67079 Kyats )weiwei (66784 Kyats )cobra (62183 Kyats )fatty (61354 Kyats )Anzartone (59075 Kyats )MaMa (57851 Kyats )Top Posts & Pagesဟေမာနေဝင်း ထောင်မှလွတ်နှင့် အခြားNews